Qamaarka ma dambi baa? Muxuu Baybalka ka dhahay qamaarka?
Su’aal: Qamaarka ma dambi baa? Muxuu Baybalka ka dhahay qamaarka?
Jawaab: Baybalka si gaar ah si gaar ah uguma cambaareyn qamaarka, sharadka, ama lootada. Baybalka nagama waaniyo, si kastaba, in laga joogo jaceylka lacagta (1 Timoteyos 6:10; Cibraaniyada 13:5). Baybalka sidoo kale wuxuu nagu dhiirogelinayaa inaan ka fogaano isku dayada “taajir noqoshada degdega” (Maahmaahyadii 13:11; 23:5; Wacdiyahii 5:10). Qamaarka sida xaqiiqda wuxuu diirada saaraa jaceylka lacag iyo isku dayga la isku raacsanyahay dadka ee balanta dhaqsida iyo taajirbimada sahlan.
Maxaa ka qaldan qamaarka? Qamaarka waa arin adag sababtoo ah haddii lagu sameeyo dhexdhaxaadinta lagu sameeyo iyo kaliya dhacdada, waa lacag lumis, laakin ma ahan sheydaan xun. Dadka waxay lacagta ku lumiyaan dhammaan howlaha oo qaab walba. Qamaarista ma jirto markale ama lacag lumin ka yar aragtida filim (xaalado badan), cunista cunto aanan si muhiim ah qaali u noqon, ama iibsashada SHey aan qaali aheyn. Isla waqtigaas, xaqiiqda in lacagta laGu lumiyo waxyaabaha kale ma xaqiijiso qamaarka. Lacagta waa in la lumiyaa. Lacagta xad dhaafka ah waa in loo keydiyaa baahiyada mustaqbalka ama lagu bixiyay shaqada Illaah, aanan banaanka loogu qamaarin.
Iyada oo Baybalka uusan si cad u sheegin qamaarka, ma sheego dhacdooyinka “nasiibka” ama “fursada.” Sida tusaalaha, tuurashada tuurida waxaa lagu isticmaalaa Leviticus si aad u kala dooratid rida ala bariga iyo qaladka. Joshua wuxuu tuurtay tuurashada lagu go’aansanayo qeybta dhulka ee qabiilada kala duwan. Nexemyaah waxay tuuratay tuurasho lagu go'aansanayo cida ku nooleyso gudaha darbiyada Jerusalem. Rasuulada waxay turtaan tuurashada si loo go’aansadobadelida Judas. Maahmaahyadii 16:33 wuxuu yiri, “Tuurashada waxaa lagu tuuraa meel simman, laakin waa go'aan walba ee Illaah ka imaaday.”
Muxuu Baybalka ka dhahay kaasiinada iyo lootada? Kaasiinada waxay isticmaalaan dhinacyo walba ee nidaamyada si loogu sababo qamaarayaasha sida badan ee suurtogalka ah. Waxay inta badan bixiyaan qamri aanan qaali aheyn ama xitaa bilaash ah, taas oo dhiirogeliso cabsanaanta, iyo halkaas kadib korodhaa kartida lagu sameynayo go’aan caqli ah. Wax walba ee ku jiro kaasiinada si wanaagsan ayay u maamulaan qaadashada lacag oo wax badan ah iyo siinta waxba oo soo celin ah, markii laga reebo degdegyada iyo raaxada ebarka ah. Lootooyinka waaxay isku dayeen inay sawiraan nafsadooda sida qaab lagu maalgelinayo barnaamijyada waxbarashada iyo/ama bulshada. Si kastaba, daraasada waxay muujineysaa in ka qeybqaatayaasha lootada sida badan waa kuwa ugu yaraan awoodi karo inuu lacag ku isticmaalo tikidhada lootada. Jaceylka “taajir noqoshada degdega” aad ayuu ugu weynyahay rabitaanka lagu diidayo kuwa u baahan. Fursadaha lagu guuleysanayo waa infinitesimal, taas oo sababto in dad badan noloshooda la haleeyo.
Miyuu nidaamka laqtiyaa nasiibka/lootariga farxad geliyaa Illaah? Dad badan waxay sheegtaan inay ciyaarayeen lootariga ama qamaarka si markaas ay u siin karaan lacagta kaniisada ama sabab kale oo wanaagsan. Iyada tani ay noqon karto dhiiranaan wanaagsan, dhabtii waa mida dhoor isticmaalo ee guuleysiga qamaarka oo ujeedooyinka Illaah ah. Daraasadaha waxay muujinayaan in guuleystayaasha ugu weyn ay xittaa tahay xaalad ganacsi xun DHoor sanno kadib ku guuleysiga abaalmarinta lacag ka badan sida ay aheyd ka hor. Dhoor, haddii ay wax jiraan, sida dhabta ah lacagta sababta wanaagsan ah. Waxaa intaa dheer, Illaah uma baahna lacagteena inaan ku maalgelino Howlgalkiisa aduunka. Maahmaahyadii 13:11 wuxuu yiri, “Lacagta aanan cadaalada aheyn tirooyinka fog, laakin yaa isu keeno lacag wax yar oo sameyno yar ay sameyso.” Illaah waa madax banaanyahay oo wuxuu bixinayaa baahiyada kaniisada oo dhinaca qaabab daacad ah. Illaah miyaa lagu sharfay helida lacagta daroogada lagu deeqay ama lacagta lagu xaday dhaca? Dabcan ma ahan. Midkoodna miyuu Illaah u baahanyahay ama rabaa lacag laga soo “xaday” saboolka oo taajiriinta.
Mida koowaad Timoteyos 6:10 wuxuu noo sheegayaa inaga, “Jaceylka lacagta waa wadada noocyo walba oo xummaan. Dadka qaarkood, waxay rabaan lacag, waxay ka wareegeen aaminaada oo ku dolooliyay nafsadooda cabasho badan.” Cibraaniyada 13:5 wuxuu ku dhawaaqay, “Ka fogeeya nololahaada xor ka ah jaceylka lacagta oo wadata waxa aad haysid, sabatoo ah Illah wuxuu yiri, ‘Marnaba kaama tagayo adiga; marnaba kuma deyrinayo adiga.’” Matayos 6:24 wuxuu sheegay, “Ma jiro qof u adeegi karo labo mastaro. Midkood wuxuu nacayaa mid oo jaclaanayaa midka kale, ama wuxuu la gooniyeeyo midka iyo sidaas darteeda. Uma adeegi karo labadaba Illaah iyo lacagta.”